रिहा भएलगतै डा केसी अनशनमा, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबिरुद्ध चार न्यायाधीशको यस्तो तर्क | Corporate Nepal
२७ पुष २०७४, बिहीबार २७ पुष २०७४, बिहीबार
रिहा भएलगतै डा केसी अनशनमा, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबिरुद्ध चार न्यायाधीशको यस्तो तर्क
पत्रपत्रिकाबाट २७ पुष २०७४, बिहीबार २७ पुष २०७४, बिहीबार
काठमाडौँ: चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट तारेख पाए पनि अनशन जारी राखेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा. शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार साँझ साधारण तारेखमा रिहा भएलगत्तै डा. केसी पुरानै अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीको कडा सुरक्षाबीच प्रहरी एम्बुलेन्समा राखेर ७ः३० बजे अनशनस्थल पुर्‍याइएको थियो । केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार अनशनस्थलमा केहीबेर अब कसरी अगाडि जाने भन्नेमा आन्तरिक छलफल भयो । क्षेत्रीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । केसीको मागअनुसार सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’
बरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारी
प्रधानन्ययाधीसले नागरिकतामा किर्ते गरेका छन् यस विषयमा छानविन हुने कि नहुने, बरिष्ठ अधिबक्ता भण्डारीले भने, ‘सम्मानित पदमा पुगेको मान्छेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठिरहेका बेला सर्वोच्चले छानविन समिती गठन गरेर निलम्बन किन नगर्ने ? बिभिन्न समाचारमा मेडिकल माफियाको विषय आएको हुदाँ अब प्रधानन्यायाधीसलाई निलम्बन गरेर कागजपत्रको छानविन किन नगर्ने, उनले ईजलास समक्ष भने, ‘ म गोबिन्द केसीले प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली माथी लगाएको आरोप यस आधारमा पुष्टि गर्छु कि भ्रष्ट्र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुबेदीलाई एक वर्षमा तीन तह बढुवा कसरी भयो ? माफियाको अर्थ मेडिकल कलेजलाई धमाधम स्वीकृति दिनु माफियाको स्वार्थमा काम गरेको हो कि होईन? र अपराध उहाँ(प्रधानन्यायाधीस) ले दुई थरी नागरिकता पेश गरे, उमेर सच्चाए अनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बुझाए । यस कारण आधार सहित पुष्टि गर्दछु ।
श्रीहरी फुयाँल (बरिष्ठ अधिबक्ता)
स्वच्छ न्याय दिने भनेको न्यायालय माथी भ्रष्ट्रचार भयो भनी प्रश्न उठेपछि भ्रष्ट्रचार छ कि छैन भनेर भनिरहनुपर्छ । न्यायालयले गर्ने आदेश माफियाको पक्षमा हुनुलाई भ्रष्ट्रचार नभनेर के भन्ने । अदालतको आदेश किन बिबादित बन्यो छानबिन हुन जरुरी छ । चिकित्सक केसीलाई अभिव्यक्तिका कारण मानहानी भनेर पक्राउ गर्नु न्यायोचित देखिदैन ।
एकराज भण्डारी (बरिष्ठ अधिबक्ता)
न्यायाधीस आफैले भ्रष्ट्रचार छ भनेर स्वीकाछन् । न्यायालय भ्रष्ट्र छ भन्दा फेरी किन आपत्ती जनाउनुपर्‍यो । सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीसको मुखराबृन्दबाट न्यायालयको भ्रष्ट्रचार उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्नु भ्रष्ट्रचार छ भन्नु होईन र । भ्रष्ट्रचारको विषयमा बोल्ने कोही थिएनन अहिले उक्त विषय डा.गोबिन्द केसीले उठाए । अब पश्न गर्ने ठाउँ धेरै छन् अब अदलतको भ्रष्ट्रचारको विषयमा छानविन हुन जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार एक विशेष समिती गठन गरेर भ्रष्ट्रचारको विषयमा छलफल किन नगर्ने?
गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) बरिष्ठ अधिबक्ता
भ्रष्ट्र न्यायाधीस अदालतमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रश्न अब उठिसक्यो । प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीको एसएलसि प्रमाण पत्र नक्कली भएको विषयमा छानविन किन नगर्ने? प्रधानन्यायाधीसको निलम्बन गरेर छानबिन समितीले छलफल गर्नु जरुरी छ । गोबिन्द केसीलाई मात्रै छानेर अदालतको मानहानीको मुद्धा लगाईयो । यहाँ त हजारौले अदालतको आदेशका विरुद्ध बोलेका छन् सबैलाई मानहानी लगाए भयो नि ?
केसीलाई साधारण तारेखमा छोडियो, पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश
प्रधानन्यायधीसविरुद्ध उत्रिएका डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै केसी १४औं अनसनमा
सर्वोच्चमा डा केसीको बयान हुँदै
बयान दिंदै केसीले प्रश्न गरे – पराजुलीको नागरिकता, एसएलसी, मेडिकल लाइसेन्स…
डा केसी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित